Ninkii Ajaanibka ahaa ee Duleedka Ceerigaabo Lagu haystay ayaa maanta la soo samata bixiyay | maakhir.com
Ninkii Ajaanibka ahaa ee Duleedka Ceerigaabo Lagu haystay ayaa maanta la soo samata bixiyay
Ceerigaabo:- Wararka naga soo gaadhaya magaalada Ceerigaabo ayaa sheegaya in saka hiirtii waa Bari la siidayay ninkii Jarmal-ka ahaa ee Afduubka loogu haystay Duleedka Magaalada Ceerigaabo, arintaasi ayaa waxa dhexda u xidhay odaayaal dhaqameedka Deegaanka iyaga oo Dadaal dheeraad ah ugalay sidii ninkaasi loo soo samata bixin Lahaa.
Ninkan oo ahaa madaxa mid ka mid ah shaqaalaha hay’ad samafal oo laga leeyahay wadanka Jarmalka oo lagu magacaabo (Agroo Action ) ayaa waxaa lagu soo daayey awood iyo cudud ciidan oo loo adeegsadey kooxahii dableyda ahaa ee afduubka u haystey ninkaasi kuwaasi oo ciidamada maamulka la magac baxay Somaliland oo gacan ka haleyey dadka deegaanka ninkaasi lagu haystey ay awood kaga soo furtaan ninkaasi, isla markaana soo badbaadey.
Mid ka mid ah dadkii hawshaasi dhexad u xidhay inay sii daayaan Ninkaasi oo LaasqorayNet la soo xidhiihay ayaa sheegay inay soo samata bixiyiin Ninkaasi isaga oo xaaladiisa Caafimaad wanaasan tahay la keenay Magaalada Ceerigaabo.
Waxa kaloo oo uu sheegay inay Rasaas is waydaarsadeen Budhcadii iyo Ciidan ay wateen dad Deegaanka Ceerigaabo ka booqlay,waxa la oo soo tabinayaa inuu dhaawac soo gaadhay Laba ka mid ah Budhcadii iyada oo la Cadeeyay inuu dhaawacoodu ahaa mid Halis ah.
Ninkan la Afduubay maalintii shalay ayaa waxa uu ka mid ahaa Shaqaalaha Hay”add samafal ah oo lagu magcaabo( Agroo Action) taasi oo ka shaqayn jirtay arimaha Deegaanka gaar ahaan Xanaanayta Shinida.
Ragii falkaasi gaystay oo tiradooda lagu sheegay 7-Ruux ayaa waxa hogaaminayo nin Masuul sare ka ahaan jiray Maamulka Somaliland isaga oo mudo hore laga Cayriyay shaqada.
Dhanka kale Odayaal dhaqameedka Degaanka Ceerigaabo ayaa farta ku fiiqay inay wali ku raad joogaan Ragii falkaasi gaystay ayna soo qabanayaan si loo horkeeno Maxkamada. Maakhir.com/ Ceerigaabo
« Maamulka Puntland kan Somaliland ayaa Food is daray maanta
Yuusuf, Zanawi iyo Uweri Musevani ayaa shir Sadex Geesood ah yeesay »